Karaiba: Fanamarihana ny Fanafahana ny Fanandevozana · Global Voices teny Malagasy
Karaiba: Fanamarihana ny Fanafahana ny Fanandevozana
Voadika ny 10 Septambra 2012 7:57 GMT
Maro amn'ireo firenena Karaiba androany no mankalaza ny Andron'ny Fanafahana tamin'ny fanandevozana, izay ahatsiarovana ny fanafoanana ny fanandevozana. Isan-taona, manamarika ilay vanim-potoana ireo mpitoraka bilaogy, fa tamin'ity taona ity, saika ambany ny fifantohan'ny saina tety anaty aterineto momba io fialantsasatra io, raha azo isaina aminny rantsan-tànana fotsiny ny mponina amin'ny aterineto milaza izany eo amin'ny lahatsorany na eo amin'ny bitsiny.
Avy any Guyana, namerina naneho ny Filazana ny Andron'ny fanafahana amin'ny fanandevozana nataon'ny Filoha i Demerara Waves, raha toa kosa ny mpiray vodirindrina aminy i Barbados Free Press, mihevitra fa mety kokoa ny “mivavaka ho an'ireo olona an-tapitrisany izay mbola voatàna ho andevo” amin'ny alalan'ny fivarotana olona.
Nahatsapa ny mpitoraka bilaogy Jamaikana diaspora, Geoffrey Philp fa androany no fotoana tena tsara hiresahana izao resaka izao mba hanafahana an'i Marcus Garvey, ary hamahanana ny rakitsarin’ i Bob Marley manao ny Redemption Song mba ho fahatsiarovana ny “profetantsika”.
Any Trinidad sy Tobago, namerina naneho indray lahatsorany ‘Fanafahana amin'ny fanandevozana’ i Afra Raymond, izay nivoaka tamin'ny sokajy fandraharahana taoa min'iray tamin'ireo gazety mpivoaka isan'andro tamin'ny 2009. Nohariny ity lahatsoratra ity ho toy ny ” andrana amin'ny tolona miaraka amin'ireo antony sy vokatra tsy misy milaza” amin'ny loza ateraky ny CL Financial sy ny toe-karena Hindu Credit Union ary manome soso-kevitra izy manao hoe:
Raha ny hevitro dia mifototra avy amin'ny olantsika avy amin'ny foko ny ampahany lehiben'ireto tantara roa mifandray ireto – ny CL Financial sy ny faharavan'ny HCU. Mety ho hadisoana goavana ny manala ny resa-poko raha miezaka mahazo ireo krizy ireo.
Tsy nanam-potoana ny hidirana lalina amin'ny asan'ny foko amin'ny resaka HCU aho, ka ity no atolotro mifandray amin'ny CL Financial sy ny fankalazana ny Andron'ny Fanafahana ny fanandevozana antsika Afrikana…
Avy amin'ny jackhynes ny sary thumbnail nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, nampiasaina niaraka tamin'ny fahazoan-dalana an Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Creative Commons license. Tsidiho lahatsary flickrn'i jackhynes’ flickr photostream.